Isevisi yeBelom Basel | Umqhubi ongeyindleko nge-limousine
Limousine iqesha iBasel. Inkonzo efanelekileyo kunye namaxabiso amanani
Uhambo oluya kwi-honeymoon yakho, indawo yeeholide, imitshato, iintlanganiso kunye nangaphezulu.
zethu inkonzo yokuthuthwa Basel umele uhanjiswe kakuhle kunye nomgangatho wethu ophezulu Izithuthi ezivela eMercedes, Unomhlangano obalulekileyo kwaye kufuneka uxoxe ngezinto ezithile ezibalulekileyo xa usendleleni, uqeshe ii-limousines zethu zokuhamba ngokucokisekileyo nokukhuselekileyo ukusuka kwindawo oyifunayo ukuya kuyo.
I-Basel Limousine yesevisi inxaxheba kuwe
Ukuba unyulo oluninzi kwiindawo ezahlukeneyo ngosuku olunye, umz. Ukusuka eBasel emva koko Zurich, ilusini, EBern, Geneva / Genève okanye ezinye izixeko eSwitzerland, xubusha indlela yakho kunye nathi kubandakanya ixesha lethu lokulinda. Siqinisekisa ukuba uhlahlo lwabiwo-mali kunye nenkonzo ephezulu kakhulu ye-limousine eBasel naseSwitzerland.
bethu abathengi bevela kumashishini alandelayo:
• jonga imboni
• Ubunjineli bezandla.
Sitshilo, nathi sifuna ukuza ukuzisa abaqhubi bethu kunye nezithuthi zethu, ukuze wenze okokuqala. Ngokuqinisekileyo uya kufumana i-sedan efanelekileyo yohambo lwakho loshishino.
Isevisi yaseBasel yaseLimine
Ukuqeshisa iNkonzo yamaZwe eHlabathi
inkonzo yokuthuthwaI-International evela eBasel ithetha ukuba sihamba ngeendlela ezide kunye ne-limousines yethu yaseSwitzerland. Kungakhathaliseki ukuba ufuna ukuhamba ngokukhawuleza ukusuka eBasel, eZurich okanye eBerne ukuya kwiqesha elizweni eliphesheya, okanye nje ufuna ukufumana uhambo olukhululekile kwihambo lakho elide, siyaqinisekisa ukuba awuphuthelwa nantoni ngexesha lohambo. Sikuzisa ngokukhuselekileyo kunye neengqiqo kunye ne-limousine yethu esuka eBasel ukuya eJamani okanye eFransi.
Qasha ngoku i-VIP yakho yokuthutha inkonzo evela kwi-Limousine Service Basel!
Qaphela: Nceda kunye * ukuzalisa amacandelo aqingqiweyo.